चौकुनेमा विकास रणनीति बनाउदा शिक्षकलाई बेवास्ता !
घाटगाउँ डटकम बिहिबार, असोज ८, २०७७, १०:४०:००
८ असोज, सुर्खेत । विकासको पहिलो पूर्वाधार हो, शिक्षा । समाजमा उज्यालो ल्याउने शिक्षा नपाएसम्म मानिस विकासशील हुन सक्दैन् । समाज अघि बढ्न झनै सक्दैन् । त्यसैले शिक्षाका समाजको विकासका लागि पहिलो खुड्किलो हो ।
तर गाउँपालिका एवं नगरपालिकाले दीर्घकालिन विकास योजनाका लक्ष्यहरु निर्धारण गर्दा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाई नसमेट्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ । स्थानीय स्तरमा सामूदायिक एवं निजी विद्यालयमा रातदिन खटिएका शिक्षकलाई गाउँपालिकाको दीर्घकालिन रणनीति बनाउँदा बेवास्ता गर्ने गरिएको शिक्षकहरुको गुनासो छ ।
चौकुने गाउँपालिकाले पनि यही पद्धतिलाई पछ्याएको छ । बिहीबारदेखि गाउँपालिकाको सभाहलमा आयोजना गरिएको दीर्घकालिन विकास रणनीतिको कार्यशालामा सबै सरोकारवालाई बोलाउँदा शिक्षकहरुलाई भने बेवास्ता गरिएको छ ।
कार्यशालामा गाउँ कार्यपालिकाका पदाधिकारी सबैलाई बोलाइएको छ । यस्तै गाउँपालिकामा क्रियाशिल राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरु पनि कार्यशालामा अनिवार्य रुपमा आमन्त्रित गरिएको छ ।
गाउँपालिकामै रहेका विषयगत शाखा प्रमुखलाई बोलाइएको भएपनि उनीहरु शिक्षक नभई कर्मचारी हुन् । विषयगत शाखामा शिक्षा शाखा प्रमुखलाई पनि बोलाइएको छ । तर गाउँपालिकाका कर्मचारीमध्येबाट हुने शिक्षा शाखा प्रमुख शिक्षक नभई निजामति कर्मचारी हुन् । निजामति कर्मचारीले शिक्षा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् ।
यस्तै वन डिभिजन कार्यालय, हुलाक कार्यालयबाट पनि प्रतिनिधित्व कार्यशालामा बोलाइएको छ । बजार व्यवस्थापन समिति, नेपाल रेड्क्रस सोसाइटी, महिला सञ्जाल, ईलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरीलाई समेत बोलाइएको छ । तर यति धेरै व्यक्तिलाई कार्यशालामा बोलाउँदा एक जना शिक्षकलाई भने बोलाइएको छैन् । यसले चौकुने शिक्षकहरुलाई भने दुःखित तुल्याएको छ ।
शिक्षाविना समाजको विकास कसरी हुन्छ ?
कार्यशाला आयोजना भएको समाचार थाहा पाएपछि शिक्षकहरुले आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका छन् । शिक्षक रत्नप्रसाद गौतमले कार्यशालामा कम्तीमा एक जना भएपनि शिक्षक राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनी पहिले चौकुने १० घाटगाउँमा रहेको सरस्वती माविमा अध्यापन गराउँथे ।
यस्तै शिक्षक लालबहादुर थापाले पनि विकास रणनीति बनाउँदा शिक्षकको प्रतिनिधित्व गराउनैपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय मावि लगामका शिक्षक रहेका थापाले शिक्षकको सहभागिता विनाको विकास रणनीति कार्यान्वयन हुन नसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
रणनीति कार्यान्वयन मात्रै होइन, समाजकै दीर्घकालिन विकास हुन नसक्ने पनि थापाको भनाई छ । शिक्षा क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा नै शिक्षामा निजी र सामूदायिकको खाडल गहिरिएको, शिक्षा महंगो बनेको, बेरोजगारी बढेको र समाज शिक्षित भएपनि रुढीवादी परम्पराबाट मुक्ति पाउन नसकेको अभिव्यक्ति उनको छ ।
‘किन शिक्षा क्षेत्रलाई आमन्त्रित नगरेको ?किन उपेक्षा गरेको ? यसरी कसरी विकास हुन्छ समाजको ?’ कार्यशालामा शिक्षकको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै शिक्षक थापाले प्रश्न गर्दै भनेका छन, ‘जबसम्म शिक्षामार्फत जनताको चेतना विकास हुदैन । तबसम्म जसले जेसुकै गरे पनि समाजको दिगो विकास हुन सक्दैन भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ।’
शिक्षकहरुले प्रश्न गरेपछि चौकुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले कार्यशालामा शिक्षा शाखाको प्रतिनिधित्व गराइएको बताएका छन् । कार्यशालामा गाउँपालिकाका विषयगत सबै समितिको प्रतिनिधित्व गरिएकाले त्यसअन्तर्गत शिक्षा शाखालाई पनि समेटिएको उनको भनाई छ ।
‘विषयगत शाखा प्रमुखमा शिक्षा पर्दछ । आमन्त्रित गरेको छ’ पौडेलले भनेका छन् । तर विषयगत समितिका तर्फबाट शिक्षा शाखाको सहभागिता गराएपनि त्यो शिक्षकको प्रतिनिधित्व होइन ।
कार्यशालामा बजार व्यवस्थापन समिति, व्यापारी, प्रहरी, महिला क्षेत्रको सहभागिता गराउँदा समाज विकासको अग्रणी भूमिकामा रहेका शिक्षकको प्रतिनिधित्व गराउन भने गाउँपालिका चुकेको छ । यसप्रति शिक्षकको गुनासो जायज मात्रै होइन, गाउँपालिकाका हुने हरेक कार्यक्रम, विकासे रणनीतिमा शिक्षकको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज ८, २०७७, १०:४०:००
चौकुनेका युवक रावलको दक्षिण कोरियामा मृत्यु बिहिबार, असोज ८, २०७७, १०:४०:००
पन्त र शाहीको हातमा रविन्द्र स्मृती ब्याडमिन्टन प्रथम पुरस्कार बिहिबार, असोज ८, २०७७, १०:४०:००
भेरी कर्णालीको दोभान विकास गर्ने कहिले ? बिहिबार, असोज ८, २०७७, १०:४०:००
हुम्लामा खाद्यान्न अभाव बिहिबार, असोज ८, २०७७, १०:४०:००